Meeshaalee - Wabi Kuusaa DeetaaFili
Dirreewwan kuusaa deetaa kee keessaa dubbis qofa ta'e mila'annoo madda deetaa cufmuusaa mirkaneessi.
Dhiheessi kuusaa deeta wabii fakkenyaa galmeewwan kitaabolee qabate.
Gabatee kuusaa deetaa wabii keessaa filuuf, galmeewwanii barbaaduuf ykn galmeewwan gingilchaawwan fayyadamuun foo'uuf kamshaa deetaa fayyadami.
Galmee Haaraa Saaga
Galmee uumuuf, qabduu urjoo(*) mula'annoo gabatee jalaa cuqaasi. Tarreen duwwaan dhuma gabateetti dabala.
Galmeewwan Gingilchuu fi Barbaaduu
Jefura dirree galfatataatti mitteessun galmeewwaniif barbaaduu ni dandeessa.
Furtuu Barbaachaa galchuu.
Odeeffannoon barbaachaa feetee barreessi, ittaansuudhan Galchuu dhiibi. Dirqaalee gingilchaa barbaachaa jijjiiruuf, sajoo OfGingilchaa dheeraa cuqaasi, ittiansuudhaan dirree deetaa garagaraa fili. Turbaawwan abalaa kanneen akka % ykn * lakkoofsa arfiilee kamuufa, fi - ykn ? arfii tokko barbaacha kee keessaa Galmeewwan gabatee keessa mara agarsiisuuf, sanduuqa kana haqi,ittiansuudhaan Galchuu dhibi.
Dirree deetaa jecha sanduuqa Furtuu Barabaachaa keessatti galchitee fayyadamuu barbaaduu feetee filuuf dheeraa cuqaasi. Dirree deetaa tokko qofa barbaaduu dandeessa.
Tarreen galmeewwan gabatee qindaa'a gingiiglchuu haaraa walsiimsiisuuf ofumaan haaromse.
Dirqale barbaachaa Of Gingilchaa Calaaluu fi walitti makuuf Gingilchaa Durtii fayyadami.
LibreOffice qindoomina gingilchaa ammee yeroo ittaanu qaaqa bantu olkaa'a.
Galmee gabatee ammee keessaa haquuf, tarree irrantoo galmee mirga cuqaasi, ittansuudhaan Haquu fili.
Madda deetaa jijjiruu
Wabii kuusaa deetaaf madda deetaa fili.
Mee irraantoowwan tarjaa gara dirreewwan deetaa madda deetaa gara garaa irraa maappii godhi. Maddeen gara garaa wabii keetif hiikuuf, qabduu Madda Deetaagalmee irraa Kabala Wantaacuqaasi.
Dirree deetaa kan Maqaa tarjaa ammeetti maappesuu barbaadde fili. Dirreewwan deetaa jireessa jijjiiruuf, wabii keetiif madda deetaa gara garaa fili.
Title is: Kuusaa Deetaa Wabii